फेब्रुअरी २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2018 / फेब्रुअरी
प्रकाशित फेब्रुअरी 28, 2018
G58LEU द्वारा सेवा मेनूबाट टकपोड N7 अडियो समायोजित गर्दै
अन्तमा मसँग मिडिया भोल्युमको लागि राम्रो कन्फिगरेसन हुन्छ, अर्थात् त्यो जुन धेरैजसो समयको महत्त्व राख्दछ। ईन्जिनियरि menu मेनू अडियो सेक्सनमा -> लाउडस्पीकर मोड -> मिडिया मैले ० ० से १ 0० सेट गरें, त्यसपछि चरण प्रति per थपे त्यसैले त्यो स्तर १ १ 160 हो, स्तर २ १ 6२, इत्यादि। यसले लगभग बन्द स्तर दिन्छ। न्यूनतम भोल्यूम र उच्चतम भोल्युमको लागि लगभग शोरको तह।
यो एक धेरै अजीब समायोजन थियो। १ 160० भन्दा थोरै सुरू गरेमा सबै स्तरहरू धेरै चर्को भए, र १ 160० भन्दा कमको मतलब सबै भोल्युम स्तरहरू धेरै शान्त थिए। त्यो सेटिंग निश्चित रूप मा सम्पूर्ण दायरा पार रैखिक छैन!
नोट: सेवा मेनू प्रविष्ट गर्न, निम्न कोड डायल गर्नुहोस्: * # * # 3646633 # * # *
प्रकाशित फेब्रुअरी 28, 2018 मार्च 1, 2018
नेटवर्क रेडियो - एमेच्योर रेडियो मा एक मार्ग?
By क्रिस रोलिन्सन G7DDN
केहि वर्षको लागि, एमेच्योर रेडियोको शौकले एक बढ्दो अस्तित्वगत संकटको सामना गर्यो।
रेडियो टेक्नोलोजीको शुरुआती दिनहरूमा, एमेच्योर रेडियो प्रयोगकर्ताहरू, प्राविधिक आरएफ टेक्नोलोजीको अत्याधिक व्यक्तिहरूमा धेरै नै एक शौक थियो। तिनीहरूले नयाँ मैदान तोडे र वाणिज्यिक अपरेटरहरू र प्रसारकहरूलाई आरएफ स्पेक्ट्रमको अधिकतम बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरे। अचम्मको कुरा, धेरै प्रारम्भिक हेम्स बीबीसी जस्ता संस्थाहरूको स्थापनामा संलग्न थिए।
१ 1939 1945 -XNUMX --XNUMX XNUMX radio देखि रेडियो कम्युनिकेटरहरूले खेलेको निर्णायक भूमिकाको अनुसरण पछि, यस शौकले युद्धपछिको संख्या देखीरहेको थियो जुन विभिन्न सिग्नल रेजिमेन्टका पूर्व सैनिकहरूले बढाउँदै आएका थिए।
त्यो युगमा, हाम रेडियोको एक ठूलो आकर्षणको निर्माण गर्दै थियो र आफ्नै उपकरण प्लस संसारको अर्को छेउमा मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्दै थियो। सामेल हुने प्रायःले इलेक्ट्रोनिक निर्माण र मोर्स कोड प्रयोग गर्ने अनुभव लिएका थिए, यसैले सोखमा प्रवेश आवश्यकताहरू त्यति दुर्य नभए जस्तो उनीहरूले पछि हेरे।
१ 1950 .० र १ 1960 s० को दशकको अन्ततिर जापानी एचएफ रेडियोको उदय देखियो, जसले आफैंमा तथाकथित "उपकरण अपरेटर" को उदयलाई जन्म दिन शुरु गर्यो, यद्यपि घर निर्माण अझै फस्टाइरहेको छ।
समुद्री डाकू रेडियोको उदयले धेरैलाई शौकमा छिर्न उत्प्रेरित गर्‍यो, कोही शंकास्पद माध्यमबाट - स्थानीय मध्यम वेभ पाइरेट स्टेशनहरू पप संगीतमा प्ले गरेको र अनजाने एमेच्योर शीर्ष ब्यान्ड आवंटनमा भौंतारिनु असामान्य कुरा थिएन। "उचित इजाजत पत्र प्राप्त गर्न" bewilderment र प्रोत्साहन को एक मिश्रण संग। धेरैले गरे।
१ 1970 .० को दशकको अन्त र १ 1980 .० को शुरुमा सीबी क्रेजले ब्याजलाई बढाउन सहयोग पुर्‍यायो, जुन सोखको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो हो, यद्यपि धेरै स्थापित एमेच्यर्सले बिल्कुल इमानदार हुन स्वागत गरेनन्, तर त्यो पनि अहिले खेर गयो।
१ 1990 21 ० को एमेच्योर रेडियोले आफ्नो नयाँ परिचय फेला पार्न संघर्ष गरिरहेको छ, खास गरी बहु-जडित २१ औं शताब्दीमा। यसले मोर्सको आवश्यकतालाई गिराएको छ, परीक्षाको प्रवेश रुचिलाई रूचिमा अधिक "प्याच" बनाएको छ, तर अझै पनि, सोशल मिडिया बढी पहुँचयोग्य, लत लाग्ने छ र इन्टरनेटले धेरै व्यक्तिको खाली समय लिन्छ।
को शौक मा आउँदै छ?
युवा व्यक्तिहरूको अभाव (र त्यसबाट हामी सायद 40० को उमेरहरूलाई गणना गर्न सक्दछौं!) रेडियोले प्रयोग गरेको धेरै कुरा पूरा गर्न सक्षम भएको इन्टरनेटको कथित "खतरा" सँगसँगै षड्यन्त्र रचेको थियो। ह्याम रेडियोमा रुचि राख्ने व्यक्तिको संख्या कम गर्नुहोस्।
हाम्रो शौकमा आउनेहरू प्रायः तथाकथित "खाली-निसारकर्ता" हुन् - जो मानिस their० वा माथिका छन्। उनीहरूसँग समय छ (र पैसा!), अब बच्चाहरूले गुँड छोडेका छन्, उनीहरूलाई याद छ कि "रेडियो शौक" मा फेरि हेर्न, जुन उनीहरूको जवान उमेरमा खेल्न कहिल्यै सकेन।
त्यहाँ केहि युवाहरू छन्, तर मेरो अवलोकन यो छ कि उनीहरूसँग मुख्यतया पारिवारिक सदस्य छ जो पहिले नै इजाजतपत्र पाइसकेका छन्, त्यसैले उनीहरूसँग घरमा, समर्थन, प्रोत्साहन र प्राय: उपकरणहरू हुन्छन्।
समस्या, समस्या ...
हाम रेडियोमा नयाँ रगत प्राप्त गर्न सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू छन्।
सायद आजको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको के हो रेडियोको "जादु" लाई हामीले अनुभव गरेनौं किनकि हामी मध्येको उमेरले गरेजस्तै। मलाई याद छ म बिस्तारै बिस्तारै m१ मी प्रसारण ब्यान्डमा old बर्षे उमेरमा ट्यून गर्दै र अनौंठो अन्तराल संकेतहरू र सुदूर देशहरूबाट लुप्त आवाजहरू सुन्न। यसले मलाई रेडियोको प्रेमले प्रेरित गर्यो जुन मैले कहिल्यै हराएको छैन। तपाईं धेरै जसो यो पढेर शायद त्यस्तै सम्बन्धित हुन सक्छ र तपाइँको आफ्नै अनुभव छ जो तपाइँको पहिलो चासो शुरू भयो।
यद्यपि २०१ 2018 मा, यी प्रकारका सals्केतहरूमा अब कुनै "जादू" छैन - विशेष गरी जब तपाईं तत्काल संसारको अर्को छेउबाट र color्ग भिडियो पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हातमा पोर्टेबल उपकरणमा!
"कुन ढोका भनेको के हो?"
धेरै वर्ष पहिले यस समुद्री परिवर्तनलाई मलाई असामान्य तरीकाले सचेत गराइएको थियो, जब मेरो सौतेली छोरीको १ 17 वर्षीया प्रेमिका मेरो रेडियो कोठामा आई र मलाई के भयो भनेर सोध्यो। मैले वर्णन गरें कि म रेडियोको प्रयोग गरीरहेको छु संसार भरि कुराकानी गर्न र मैले उनलाई के गरिरहेको छु भन्ने कुरा रोक्न खोजें।
उनले सोधे कि ठूलो रेडियोमा ठुलो गोल चीज के हो - मलाई थाहा भयो कि उनले रेडियोको मुख्य ट्युनिंग डायललाई स to्केत गरिरहेछन्।
मैले थप व्याख्या गरेँ र त्यसपछि उनले सोधिन् "तपाईंलाई यसको लागि के चाहिन्छ? त्यसो भए तपाई बटन मात्र थिच्नुहुन्न? "
यो तब मैले महसुस गरे कि अधिकांश मानिसहरू यो सोच्दै हुर्किसकेका छन् कि रेडियो कि त तपाईं "आफ्नो फोनमा पाउनुहुन्छ" वा केहि चीज जसमा प्रिसेट बटनहरू छन् जुन आफैले प्रोग्राम गर्दछन्। "सिग्नल इन ट्यूनि” "को अवधारणा पनि अहिलेको धेरै जसो पुस्तामा हराइसकेको छ!
हामी कसरी त्यसोभए मानिसहरूलाई?
अधिक प्रासंगिक हुन सक्छ? अधिकतर under० सेकेन्ड (र 50० भन्दा धेरै पनि धेरै!) यी दिनहरू तिनीहरूका मोबाइल उपकरणहरू र इन्टरनेट जडान, सामाजिक मिडिया र त्यस्तैको साथ बेस्ट गरिएको छ। के म सोच्दै एक्लो छु कि यो हामीले गर्न सक्ने कुरा हो र मानिसहरूलाई हाम्रो रुचिमा चासो लिनको लागि उपयोग गर्नु पर्छ?
नेटवर्क रेडियोहरूले मद्दत गर्न सक्दछ ...
त्यसोभए नेटवर्क रेडियो यसमा कहाँ आउँछ?
तिनीहरू हाम्रो शौकमा नयाँ टेक्नोलोजी पार गर्ने प्रतिनिधित्व गर्दछ
तिनीहरू व्यक्तिको अवस्थित रुचिहरू (फोन / ट्याबलेटहरू आदि) मा प्लग गर्दछन्।
तिनीहरू हाइब्रिड जडित उपकरण हुन् - पार्ट फोन, पार्ट कम्प्युटर, भाग PTT उपकरण
तिनीहरूले यो बनाउँछन् धेरै पहिले नै उपलब्ध PTT आधारित सफ्टवेयर केहि प्रयोग गर्न सजिलो
तिनीहरू एक्रोनिमको हरेक अर्थमा SDR हरू हुन्
तिनीहरू २१ औं शताब्दीको टेक्नोलोजी हो जुन मानिसहरूले "देख्नु" नहुने तर्कसंगत मान्दैनन् (यो पछिल्लो बुँदा आजको पुस्तालाई महत्त्वपूर्ण देखिन्छ!)
... विशेष गरी उपयोगी अनुप्रयोगहरूको साथ जोडी
Zello एक महान सुरूवात बिन्दु हो।
भाग सोशल मिडिया, भाग PTT रेडियो, यसले विश्वभरि निम्न लिइएको छ। एक बाट एक वा एक देखि धेरैलाई PTT को क्षमताको साथ, यो विशेष गरी समूह वा समान विचारधारा भएका समुदायहरूको समुदाय स्थापना गर्न चाहनेहरूको लागि चासोको विषय हो।
जर्मनीमा, उदाहरणका लागि, "Zello Funk" ("रेडियो Zello" को रूप मा अनुवाद गरिएको) समुदाय एक मिनी-ह्याम रेडियो समानान्तर ब्रह्माण्ड जस्तै संचालित!
तपाईं सामेल हुन सक्नुहुनेछ (नि: शुल्क रूपमा - लिनको लागि "कुनै परीक्षाहरू") तपाईले एउटा कल साइन अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ (जस्तै ZF839) जुन तपाईंलाई नेटवर्कमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ (यद्यपि यो अनिवार्य छैन) र तपाईं जानुहुन्छ।
त्यहाँ करीव 5000००० “PTT उत्साहीहरू” छन्, एक राम्रो वाक्यांशको लागि, जो एक्लो Zello Funk समुदायमा सामेल भएका छन् र त्यहाँ Ze जेलो फ groups्क समूहहरू बोल्ने छन्।
यी लोकहरू हेम्स, सीबी-ईरस, 446 XNUMX--ईर, ट्रकर्स, गृहिणी, श्रमिकहरू, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, सबै उमेर, पृष्ठभूमि र लि of्गको प्रायः साधारण व्यक्तिहरू - यद्यपि उनीहरूले PTT संचारको मजा लिन्छन्।
सबै समूहहरू मध्यस्थकर्ताहरूको ठूलो प्रतिबद्ध समूहले ट्र्याकमा राखेका छन् जसले कसरी समूहहरू कसरी पोलिश गरिएका छन् त्यसमा नजिक नजर राख्छन्; सदस्यहरूलाई tx-ing बाट अवरुद्ध गर्न सकिन्छ, पूर्ण रूपमा लात हान्नुहोस्, तर, र यसलाई डुबाउन दिनुहोस्…… तिनीहरूका आफ्नै अन्डर १ 16 को च्यानल पनि छ!
अहिलेको हेम रेडियोमा त्यो कल्पना गर्नुहोस्? मलाई डर छ कि प्राय जसो रेडियो क्लबहरू के गर्ने भनेर थाहा हुँदैन यदि एक जना जवान सभामा सम्मिलित भए, वा एयरमा पनि…
र त्यहाँ अझै छ ...
ज़ेलोसँग धेरै अंग्रेजी बोल्ने समूहहरू छन् जुन ह्याम्ससँग संलग्न हुन सक्दछ (हुनसक्छ जर्मनीको जेल्लो फk्क जस्तो संगठित छैन) जसको मतलब हामी तुरून्त PTT comms को उपयोग गरेर गैर-हमसको साथ कुराकानी गर्न सक्छौं।
वा हुनसक्छ कसैले जालो फk्कको अ set्ग्रेजी संस्करण सेट अप गर्न सक्दछ र के हुन्छ हेर्नुहोस्?
त्यसो भए रेडियो किन छैन?
स्पष्ट रूपमा त्यहाँ संचार को PTT शैली मा चासो छ तर यो अझै हाम्रो शौकमा नयाँ प्रविष्टिहरुलाई अनुवाद गरिएको छैन। किन?
ठिकै दिनहरू छन् कि त्यहाँ कुनै प्रभाव छ कि छैन हेर्न, तर एक प्राविधिक कोर्स र परीक्षा लिनको लागि आवश्यकता एक बाधा हो, निश्चित रूपमा। यदि तपाइँ कुनै कोर्स र अध्ययन र एक परीक्षा बिना PTT comms को मजा लिन सक्नुहुन्छ, तपाइँ किन हुनुहुन्न?
स्क्र्याचि weak कमजोर रेडियो सals्केतहरूको लागि उच्च गुणस्तरको वीओआईपी वा रोइप कॉमहरू स्वप्याप गर्दा अर्कोको रूपमा देख्न सकिन्छ; ह्याम ब्यान्डमा स्थानीय आवाज पनि अर्को हुन सक्छ, र त्यो पनि आकाशमा ठूलो मात्रामा धातु वा तारको मुद्दामा आउँदैन र यसले ल्याउने मुद्दाहरूमा…
के म यो हिम्मत गर्दछु कि बुढो मान्छेहरूको व्याकुलता पनि दु: खको साथ हुन सक्छ (बुढो मानिस आफैंको रूपमा बोल्दै!) नयाँ शौकमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि एक ठूलो आकर्षण होइन?
प्रसन्न हुन कारणहरू!
यद्यपि म यसको बारेमा सकारात्मक र उत्साहित छु।
यदि व्यक्तिहरू वास्तवमै PTT coms को साथ धेरै रमाईलो गर्दै छन्, तिनीहरूले, सत्यमा, अन्जानमै हाम्रो शौक तर्फ आफ्नो पहिलो कदमहरू छन्। म उनीहरूसँग फिर्ता पुग्न हामीले अझ धेरै गर्न सक्दछु भन्ने तर्क गर्छु।
हुनसक्छ हामी हेम्सको रूपमा आफूलाई सामाजिक मिडिया समुदायको रूपमा पुन: ब्रान्डिंग गर्नुपर्दछ जुन इन्टरनेट बिना नै अवस्थित हुन सक्दछ, साथै यसको साथ पनि? त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि हुनसक्दछ जुन हामी हाम्रो "हेराई" लाई सुधार्न सक्छौं। सायद तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा केहि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ?
जे भए पनि, यस हाइब्रिड विश्वमा अवस्थित नेटवर्क रेडियोले, र म विश्वास गर्दछु, मानिसहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा "रेडियो बजाउन" अनुमति दिन र यसले उनीहरूको चासोको आवश्यकता छ कि छैन भनेर हेर्नमा धेरै उपयोगी भूमिका खेल्न सक्छ।
IRN तब तार्किक "अर्को चरण" को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ नयाँ आगमनले वास्तविक RF लिंकहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दछ।
यो बाहिर पुग्न को बारे मा छ ...
त्यसोभए मँ सुझाव दिन्छु कि हामी जति धेरै एमेच्योरहरू नेटवर्क रेडियोमा चल्छौं, हामी “पीटीटी उत्साहीहरू” को बढ्दै गइरहेको समूहहरूतर्फ अझ बढी कदम चाल्छौं र हामी वास्तवमै उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्न सक्छौं?
के यो रेडियो हम्सको अर्को "वेभ" फेला पार्न सकिन्छ, जहाँ म आश्चर्य छ?
एउटा कुरा निश्चित छ, तिनीहरू हामीकहाँ आउँदैनन्, जस्तो कि सीबी-ईर्सले १ 1980 s० को दशकमा गरे - हामीले बाहिर जान, उनीहरूलाई फेला पार्नु र उनीहरूसँग मैत्री गर्नुपर्‍यो, यदि हामीले उनीहरूलाई हाम्रो ठूलो शौकमा मद्दत गर्ने हो भने!
© मार्च २०१ - - क्रिस रोलिन्सन G7DDN
जब वाइफाइ अनुपलब्ध हुन्छ, 3G जी, वा केवल सादा यूएचएफ प्रयोग गर्नुहोस्
यो Inrico T298s UHF एक संकर UHF नेटवर्क रेडियो हो। नेटवर्क रेडियोको साथ सुरू गर्न यो एक राम्रो तरिका हो। कमसेकम, यदि तपाइँ नयाँ इन्टर्नेट मोडहरू मनपराउँनुहुन्न भने, तपाइँ यसलाई यूएचएफ ह्यान्डहेल्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
PS - यसको नेटवर्क रेडियो साइड प्रयोग गरेर, लत हुन सक्छ। Old-schoolers समावेश! 🙂
प्रकाशित फेब्रुअरी 21, 2018 फेब्रुअरी 22, 2018
यो सबै क्रिस G7DDN द्वारा प्रचारको बारेमा हो
यहाँ बेलायतमा मेरो स्थानीय क्लबको लागि नेटवर्क रेडियोको बारेमा कुराकानीको तयारी गर्दा, यसले मलाई आश्चर्यचकित पार्‍यो कि नेटवर्क रेडियो र "परम्परागत" ह्याम रेडियोको मूलभूत मुद्दाहरू वास्तवमै एउटा प्रचार प्रसार हो।
हामीहरु जो हम्स हौं वा धेरै वर्षदेखि सर्टवेभ रेडियोमा डबल गरेका छौ उनीहरूले लामो दूरी प्रचारको सिद्धान्त जान्दछन्। रेडियो तरंगहरू आयनोस्फीयरबाट प्रतिबिम्बित हुन्छन् (वा VHF / UHF को मामलामा Troposphere मार्फत) र तिनीहरूको सुरूवात बिन्दुबाट लामो दूरीमा समाप्त हुन्छ। (त्यहाँ प्रचारका अन्य मोडहरू पनि छन्, अवश्य पनि, तर म यसलाई सामान्यीकरणको रूपमा प्रयोग गर्नेछु)।
प्राकृतिक v मानव निर्मित
वातावरण, निस्सन्देह, एक प्राकृतिक घटना हो र हामी हाम्रो लामो दूरी सम्पर्कहरू प्राप्त गर्न यसलाई "व्यवहार" गर्दै छौं। नेटवर्क रेडियोका लागि, यो इन्टरनेट हो जुन प्रचार माध्यम हो, कम्तिमा तिनीहरूको सम्पर्कको अन्तमा।
म वातावरण र इन्टरनेट को बीच केहि समानता देख्न सक्छु। वेब, वास्तवमा, सिग्नलहरूको लागि मानव-निर्मित प्रचार माध्यम हो - एक प्राकृतिकको विपरीत।
अन्य शौकहरूमा समानताहरू
यसले मलाई अन्य शौकहरूमा समानन्तरको बारेमा सोच्न लगायो।
उदाहरणका लागि रक क्लाइम्बि Inमा, उत्साहीहरू ठूला घरहरूमा प्राकृतिक चट्टान ढाँचामा चढ्दछन् - धेरै डरलाग्दो - तपाईले मलाई त्यस्तो गरिरहनु हुने छैन! तर त्यहाँ थुप्रै रक क्लाइम्बि “पनि छन्" भित्ताहरू "घर भित्र र त्यहाँ फोटोहरू सबै वेबमा छन्।
के मलाई यी फोटोहरू हेर्नबाट हिर्काउँदछन्, जुन घर भित्र चढ़ेको मान्छे घरको चढाईमा भन्दा त्यति नै रमाईलो भएको देखिन्छ। दुई अनुभवहरू फरक छन् र विचित्र रूपमा समान छन्।
बाहिरी चट्टान (आयनोस्फीयर जस्तै) प्राकृतिक छ - इनडोर रक (इन्टरनेट जस्तै) मानव निर्मित हो। न त पर्वतारोहीहरूले रोक्छ वास्तवमा उनीहरूको आरोहणको मजा गर्दै! चाखलाग्दो कुरा, त्यहाँ धेरै युवाहरू "मानव निर्मित" चढाई गर्दै गरेको देखिन्छ ...
"वास्तविक" हाम रेडियो?
सम्पूर्ण नेटवर्क रेडियो घटनालाई "वास्तविक ह्याम रेडियो हैन" भनेर खारेज गर्न सजिलो छ तर वरिपरि सुन्दा यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ केही खास आरक्षित ब्यान्डमा प्रसारण गर्ने "आवश्यकता" बिना नै रेडियो (वा रेडियो जस्तो अनुभव) को मजा लिने धेरै मानिसहरू छन्।
जब हामी २१ औं शताब्दीमा जान्छौं, मलाई लाग्छ हामी "प्राकृतिक रूपमा प्रचार गरिएको" स and्केतहरू र "कृत्रिम तवरले प्रचार गरिएको" संकेतहरू बीच धमिलो देख्दछौं।
CW, HF, VHF, UHF को साथ साथै D-STAR र नेटवर्क रेडियोलाई रमाईलो गर्ने व्यक्तिको रूपमा, म किन यस मुद्दाको रूपमा लिनुपर्दैन, जबसम्म हामी एमेच्योरहरूले यसलाई एक बनाउँदैनौं।
२१ औं शताब्दीमा हाम्रो बाटो आउने शानदार आविष्कारहरूको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू खारेज नगरी, हामी हेम रेडियोको विगतको बारेमा के महान छ त्यसलाई राखौं।
प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न ...
त्यसैले मके इन्टरनेट एमेच्योर संकेतको लागि प्रसारको मोडको रूपमा कुनै कम कम मान्य छ, केवल किनभने यो मानव निर्मित हो, बरु प्रकृतिको शक्ति भन्दा?
यो सबै एक छ खतरा एक शौक को रूप मा हाम रेडियो, या यो एक हो मौका?
चुनौतीपूर्ण प्रश्न र ती हामी आफैंले मात्र उत्तर दिन सक्छौं।
सायद केवल एक मात्र प्रश्न यो हो कि, के तपाइँ तपाइँको रेडियो शौक को मजा ले, कुनै पनि रूप मा लिन्छन्?
© फेब्रुअरी २०१ - - क्रिस रोलिन्सन G7DDN
प्रकाशित फेब्रुअरी 14, 2018
रेडियो टोन RT4 समीक्षा भाग १ - रिंगवे म्यानचेस्टर द्वारा सिंहावलोकन र सेटअप
को एक शानदार समीक्षा रेडियो टोन RT4 द्वारा बनाइएको रिway्वे म्यानचेस्टर
प्रकाशित फेब्रुअरी 13, 2018 फेब्रुअरी 13, 2018
कसरी टीम स्पिक on मा अडियो नियन्त्रण फिक्स गर्ने
यो ट्यूटोरियलले भोल्युम नियन्त्रणको अभाव समाधान गर्न मद्दत गर्दछ जुन टीम स्पिक latest पछिल्लो संस्करणले हाम्रो नेटवर्क रेडियोमा ल्यायो।